Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Booqday Jaamacadda Caalamiga Afrika Ee Dalka Suudaan | Banaadir Times
HomeUncategorisedRa’iisul Wasaare Khayre Oo Booqday Jaamacadda Caalamiga Afrika Ee Dalka Suudaan
Ra’iisul Wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya (XFS) mudane Xasan Cali Khayre oo booqday xarunta jaamacadda Caalamiga Ee Afrika ee magaalada Khartuum oo ay wax ka bartaan ardaya Soomaaliyeed ee ugu badan ee dalkaas waxbarashada u jooga, ayaa kula kulmay madaxda jaamacadda iyo xubna kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee ee jaamacadda wax ka barta.
Guddoomiyaha jaamacadda caalamiga ee Afrika Kamal Obeid iyo xubna kamid ah maamulka la shaqeeya ayaa Ra’iisuul wasaare Khayre iyo wafdigiisa kusoo dhaweeyay xarunta jaamacadda, waxa ayna uga mahad celiyeen booqashada uu ugu tegay iyaga oo uga war-bixiyay xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa jaamacadda caalamiga ee Afrika, jaamacadaha kale ee dalkaas iyo dawladda Suudaan uga mahadceliyay taageerada waxbarasho ee joogtada ah, waxa uuna si gaar ah u xusay in Suudaan ay kamid tahay dalalkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ka taageera waxbarashada kadib burburkii dawladdii dhexe.
Ra’iisul wasaare Khayre ayaa ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda uga xog-waramay xaaladda dalka, rejada soo kabashada, horumarrada muuqda iyo qorshaha la doonayo in lagu laba jibbaaro dadaalada lagu soo celinayo sharafka iyo Karaamada ummadda Soomaaaliyeed, isaga oo ku dhirri geliyay in ay dawrkooda ka qaataan dib u soo kabashada dalka, ayna ixtiraam iyo hab-dhaqan wanaagsan u muujiyaan shacabka iyo dawladda Suudaan.
“Waxa aad tihiin safiirradii dalkeenna, shacabka iyo dawladda Suudaan u muujiya ixtiraam, walaaltinimo, dhaqan wanaagsan, waxaa aad sidoo kale la idinka doonayaa in aad ka qayb qaadtaan dhismaha iyo dib u soo kabashada dalkeenna. Aqoontiina waa in aad dadka iyo dalka Soomaaliyeed uga faa’iidaysaan” ayuu yiri ra’iisul Wasaare Khayre.
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xarunta madaxtooyada Suudaan kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ahna madaxa golaha wasiirrada ee dalka Suudaan Bakri Xasan Saalax oo ay ka wada hadleen xariirka walaatinnimo ee soo jireenka ah ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Suudaan iyo sii adkeynta xariirkaasi.
Previous articleSawirro: Wasiiradii dhawaan la magacaabay oo maanta la dhaariyay
Next articleDowladda Soomalia oo Sacuudiga ku taageertay Mowqifkii ay Xiriirka ugu hakiyeen Dalka Canada